Qaban qaabada shirka Maamul u sameynta Jubooyinka oo ka socota Kismaayo – idalenews.com
Qaban qaabada shirka Maamul u sameynta Jubooyinka oo ka socota Kismaayo
Ergooyin ka kala socota Gobolada Jubooyinka iyo Gedo ayaa ku qul quleysa magaalada Kismaayo ee Xarunta Jubada Hoose, iyadoo ay socdaan qaban qaabada shirweynaha maamulka loogu sameynayo.
In ka badan 100 ergo ka kala socda deegaanada saddexda gobol ee qorshuhu yahay in maamulka loo sameeyay ayaa shalay gaaray Kismaayo, iyadoo magaalada laga dareemayo qaban qaabo xoogan oo ku aadan shirweynaha maamul u sameynta.
Shirkan ayaa waxaa ka qeyb geli doona Xubno ka socda Urur Goboleedka IGAD, kuwaasoo ku howlanaa maamul u sameynta Jubooyinka tan iyo markii la qabtay magaalada Kismaayo, inkastoo tuhuno badan ka jiraan qaabka IGAD wax u wado oo ah hal dhinac.
Gudiga farsamada ee loo saaray shirka maamul u sameynta Jubooyinka ayaa wada la tashiyo ku aadan dhinacyada ka qeyb galaya shirka, waxaana uu wadaa diyaarinta meelihii la dejin lahaa ergooyinka iyo wixii tasiilaad ee ku saabsan qabsoomida shirweynaha.
Siyaasiyiin, odayaal dhaqameedyo, aqoonyahano iyo dad u badan qurba-joogta ayaa gaaray magaalada Kismaayo, si ay uga qeyb galaan shirweynahan.
Maamulayaasha Kismaayo ayaa iyana qeyb ka ah, iyadoo wafdi ka socda dowladda horay loogu marti qaaday shirkan, si ay u shir gudoomiso.
Xukuumada Soomaaliya ayaa Muqdisho ku casuuntay inuu yimaado Gudoomiyaha Maamulka KMG ah ee Kismaayo Axmed Madoobe iyo wafdi uu hogaaminayo, kuwaasoo la filayo inay Muqdisho soo gaaraan todobaadka soo socda.
Inkastoo Xukuumada ay dhowaan meel mariyeen shuruuc cusub oo ku saabsan maamul u sameynta deegaanada iyo gobolada laga saaray Al-Shabaab, ayaa hadana la ogeyn sida qorshahaas uga hirgeli karo deegaanada Jubooyinka.
Baraf iyo dabeylo xoogan oo saameeyay Waqooyiga Mareykanka
Mahiiga oo ka digay in Kismaayo laga sameeyo maamul aysan ogeyn Xukuumadda